1 Okwu Jeremaya+ nwa Hilkaya, bụ́ otu n’ime ndị nchụàjà nọ n’Anatọt,+ n’ala Benjamin;+ 2 onye okwu Jehova ruru ntị n’ụbọchị Josaya+ nwa Emọn,+ bụ́ eze Juda, n’afọ nke iri na atọ nke ọchịchị ya.+ 3 O wee na-eru ya ntị n’ụbọchị Jehoyakim+ nwa Josaya, bụ́ eze Juda, ruo mgbe afọ nke iri na otu nke ọchịchị Zedekaya+ nwa Josaya, bụ́ eze Juda, gwụrụ, ruo mgbe a dọọrọ Jeruselem n’agha n’ọnwa nke ise.+ 4 Okwu Jehova wee malite iru m ntị, sị: 5 “Tupu mụ akpụọ gị n’ime afọ,+ amaara m gị,+ tupu gị esi n’akpa nwa pụta, edoro m gị nsọ.+ Emere m gị onye amụma nke mba dị iche iche.” 6 Ma m sịrị: “Ewoo, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova! Lee, amaghị m okwu ekwu,+ n’ihi na abụ m nwata.”+ 7 Jehova wee sị m: “Asịla, ‘Abụ m nwata.’ Kama, gakwuru ndị niile m ga-eziga gị ka ị gakwuru; kwuokwa ihe niile m ga-enye gị iwu ka i kwuo.+ 8 Atụla ihu ha ụjọ,+ n’ihi na ‘anọnyeere m gị ịnapụta gị,’+ ka Jehova kwuru.” 9 Jehova wee matịa aka ya metụ m n’ọnụ.+ Jehova wee sị m: “Lee, etinyewo m okwu m n’ọnụ gị.+ 10 Lee, enyefewo m mba dị iche iche na alaeze dị iche iche n’aka gị,+ ka i wee na-efopụ ma na-akwada, na-ebibi ma na-etida,+ na-ewu ihe ma na-akụ mkpụrụ.”+ 11 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ, sị: “Jeremaya, gịnị ka ị na-ahụ?” M wee sị: “Ọ bụ alaka osisi almọnd ka m na-ahụ.” 12 Jehova wee sị m: “Ị hụziri ya ahụzi, n’ihi na amụ m anya imezu ihe m kwuru.”+ 13 Okwu Jehova wee ruo m ntị nke ugboro abụọ, sị: “Gịnị ka ị na-ahụ?” M wee sị: “M na-ahụ ite e ji esi nri nke nwere ọnụ obosara, nke a fụnwuru ọkụ n’okpuru ya, ọnụ ya echeghịkwa ihu n’ebe ugwu.” 14 Jehova wee sị m: “A ga-esi n’ebe ugwu tọhapụ ọdachi nke ga-adakwasị ndị niile bi n’ala a.+ 15 N’ihi na, ‘lee, m na-akpọ ezinụlọ niile nke alaeze ndị dị n’ebe ugwu òkù,’ ka Jehova kwuru;+ ‘onye ọ bụla n’ime ha ga-abịakwa debe ocheeze ya n’ọnụ ụzọ ámá Jeruselem,+ ka ha wakpo mgbidi ya niile gbaa gburugburu na obodo niile dị na Juda.+ 16 M ga-ama ha ikpe n’ihi ihe ọjọọ niile ha na-eme,+ n’ihi na ha ahapụwo m+ wee na-esurere chi ọzọ+ dị iche iche ihe nsure ọkụ, na-akpọkwara ọrụ aka ha isiala.’+ 17 “Ma, gị onwe gị, kee ájị̀ n’úkwù,+ bilie gwa ha ihe niile m na-enye gị n’iwu. Atụla ụjọ n’ihi ha,+ ka m wee ghara ime ka ụjọ jide gị n’ihu ha. 18 Ma, lee, emewo m taa ka ị bụrụ obodo e wusiri ike na ogidi ígwè na mgbidi ọla kọpa+ iguzogide ala a dum,+ iguzogide ndị eze Juda na ndị isi ya na ndị nchụàjà ya na ndị bi n’ala a.+ 19 Ha ga-alụsokwa gị ọgụ, ma ha agaghị emeri gị,+ n’ihi na ‘anọnyeere m gị,’+ ka Jehova kwuru, ‘ịnapụta gị.’”+